Nizeriana ‘Evanjelistran-kolontsaina’ Mampiroborobo Ny Teny Afrikanina Amin’ny Alalan’ny Fampiharana sy Fitantarana Nomerika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Febroary 2017 8:10 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Ελληνικά, Português, Swahili, English, عربي, English
Pikantsary avy amin'ny fampiharana tantara nomerika Oluronbi.
Ny «evanjelistran-kolontsaina» dia voambolana tian'i Adebayo Adegbembo iantsoana azy indraindray, ary lasa famaritana sahaza ny asany izay manakambana ny teknolojia, ny fampianarana ary ny fitiavana hampiroborobo ny teny sy kolontsaina Afrikanina ao amin'ny aterineto.
Sary: Adebayo Adegbembo (nahazoana alalana).
Monina ao Lagos, Nizeria, i Adebayo ary Yoruba no tenin-drazany, teny ampiasain'ny olona eo ho eo amin'ny 30 tapitrisa eo. Efa-taona lasa izay no nahaliana azy amin'ny fampiasana ny teknolojia handrisihana ny zana-drahalahiny sy ny ankizy mpiray vodi-rindrina aminy mba hianatra ny fiteny. Amin'ny maha mpanorina ny Genii Games, nanangana ny fampiharana fampianarana teny sy sarimiaina amin'ny teny Yoruba sy teny Nizeriana sy Afrikanina hafa, ny ekipany. Araka ny fijerin'i Adebayo, lasa fitaovana lehibe mahatonga ny fianarana ny teny ho “mahafinaritra, manintona sy mampavitrika” ny teknolojia:
Technology offers the best form of creative approach to preserving native languages. It aids the process of documentation, collaboration between language experts, offers a wide array of distribution medium etc. With technology, it's easier to contextualize the languages to reach different audience categorized by age and level of understanding of the languages.
Manome endrika tsara indrindra amin'ny fomba vaovao hiarovana ny tenin-drazana ny teknolojia. Manampy amin'ny fizotran'ny fandraketana, ny fiarahamiasa eo amin'ireo manam-pahaizana momba ny teny, ary manome karazana fitaovana fampitana, sns. Amin'ny teknolojia, mora kokoa ny manome endrika ny teny mba hipaka any amin'ireo karazana mpihaino voasokaja ara-taona sy fahaizana ny teny.
Natao ho an'ny ankizy, maka ny endrika “fitadiavana anjoria mahafinaritra” ny iray amin'ireo fampiharana momba ny teny, Igbo 101. Afaka mandroso amin'ny alalan'ny fifehezana ny teny ny mpiserasera no sady mahavita ny dingana farany mahazo ny fanomezana “Amamiihe”, izay midika hoe fahaizana ny teny Igbo. Namoaka ny endrika faharoa nohavaozina ny fampiharana ary azo jerena amin'ny Android sy iOS. Misy ihany koa ny fampiharana fianarana teny hafa ho an'ny Yoruba sy Haoussa.
Raha hanangana ireo fampiharana fianarana ny teny, mila ekipa programera, mpanao sary, mpanakanto am-peo, injenieran'ny feo sy mpampianatra teny hananganana ny singa rehetra. Tena ilaina indrindra ny manampahaizana momba ny teny amin'ny dingana hifehezana ny singam-peon'ny teny Nizeriana, izay miparitaka amin'ny alalan'ny tenim-paritra isan-karazany marobe. Voarakitra tsara ny navoaka tamin'ny lahatsoratra “What Does It Take To Build An App (Inona no atao raha hanangana fampiharana)” tao amin'ny bilaogy Genii Games izany dingana izany.
Singa fanampiny amin'ny asan'i Adebayo ny fanasongadinana ny tantara avy ao Nizeria sy manerana an'i Afrika. Mba handrisihana ny taranaka any aoriana amin'ny fitantarana nomerika, dia mitarika atrikasa miaraka amin'ny ankizy mpianatra fanabeazana fototra manerana ny kaontinanta izy. Tamin'ny volana Martsa 2016, nitarika atrikasa valo miaraka amin'ireo sekoly eny ifotony manerana an'i Nizeria izy, izay nifantoka tamin'ny fananganana votoaty nomerika ho an'ny ankizy. Nizara ny hevitra fototra amin'izany asa izany izy:
It’s a workshop where we walk kids through the process of creating simple stories using technology tools. Together, we come up with ideas for stories then write out the script, draw, color, record the narration and piece it all together into an app or video. Our goal is to demystify the content creation process. Furthermore, our larger goal is to inspire these kids to take ownership of their narratives.
Izany dia atrikasa hitarihana ny ankizy amin'ny alalan'ny dingana famoronana tantara tsotra amin'ny fampiasana teknolojia. Noho ny fiarahamiasa, tonga tamin'ny hevitra hananganana tantara izahay, ka manoratra ny fizotran-tantara, manao sary, mandoko sy mandrakitra ny fitantarana ary mametraka izany rehetra izany amin'ny fampiharana na lahatsary. Ny tanjonay dia ny hamaha ny misiterin'ny dingana famoronana votoaty. Ankoatra izany, ny tanjonay goavana kokoa dia ny hanome aingam-panahy ho an'ireo ankizy ireo mba ho tompon'ny fomba fitantaran'izy ireo manokana.
Mifototra amin'ny fahombiazan'ireo atrikasa ireo, nitarika hetsika tahaka izany ihany koa izy tao Johannesburg, Afrika Atsimo, niara-miasa amin'ny iAfrikan, Who Are We Africa, Macroscopia Labs ary nampiantranoin'ny Jozihub, izay tafiditra amin'ny fetin'ny Tanora (Youth Day). Ankizy enina amby roapolo avy amin'ny sekoly fanabeazana fototra anankiroa ao Soweto no nandray anjara tamin'ny endrika rehetran'ny famoronana lahatsary 90 segondra momba ny Umngqusho, foto-tsakafo malaza avy any Afrika Atsimo. Ankoatra ny fahitana hevitra fitantarana, nandravaka ireo mpilalao fototra ny ankizy, ary nanome feo ho an'ireo mpilalao fototra ireo. Azo jerena eto amin'ity lahatsary Youtube manaraka ity ny vokatra farany:
Na dia nandroso tamin'ny fampiroboroboana ny teny Nizeriana antserasera aza ireo fampiharana sy tantara nomerika ireo, dia mbola misy ireo fanamby mba hiantohana fa afaka miditra amin'ity votoaty ity avokoa ny ankizy rehetra. Ireo ankizy avy eny amin'ny faritra ambanivohitr'i Afrika indrindra indrindra no tena voakasik'izy ity, satria vitsy ny fampiasana smartfinday eny. Nilaza i Adebayo fa zava-dehibe izany satria ny smartfinday no “manana lafin-javatra mahatonga ireo teny ireo ho hita tsara kokoa amin'ny alalan'ny media marolafy, ary mampavitrika kokoa amin'ny famoronana. Hanamora izany ihany koa rahatrizay ny fitombon'ny smartfinday mora vidy ary mieritreritra aho fa efa manomboka mahita izany isika ankehitriny.